के हो तालिबान ? जसले अफगान सत्ता कब्जामा लियो - Baikalpikkhabar
के हो तालिबान ? जसले अफगान सत्ता कब्जामा लियो
३२ साउन, काठमाडौं / अफगानिस्तानको एकपछि अर्को शहर कब्जामा लिएको चरमपन्थी विद्रोही संगठन तालिबानका लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन् ।
जलालबाद, घान्जी, फेरुज काेजस्ता धेरै शहर त उसले विना युद्ध जितेको थियो । अफगानी सेना तथा वरिष्ठ अधिकारीले आत्मसमर्पण गर्दै तालिबानलाई आफ्नो शहर सुम्पिरहेका छन् । आइतबार पनि नान्गरहार प्रान्तका गभर्नरले आत्मसमर्पण गरे, जसका कारण तालिबानले जलालबादलाई विना युद्ध नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
किनकि अमेरिकासँग शान्ति सम्झौताका बाबजुद अफगान सेनामाथि आक्रमण गर्दै आएको तालिबानले महत्वपूर्ण भू-भागलाई भने कब्जामा लिन सकेको थिएन । तर जब अमेरिकी सेनाले रणनीतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको बग्राम एयरबेस छाड्यो, तालिबान आक्रामक रुपमा अघि बढ्यो । एक साता नविग्दै पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको प्रान्तीय राजधानी काला-ए-न मा आक्रमण गर्‍यो । जुलाई २१ मा तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका महत्वपूर्ण भूभाग आफ्नो कब्जामा लियो । सुरुमा उसले ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको शहर स्पीनबोल्डक कब्जा गर्‍यो ।
अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छाडेको एक महिनापछि अगष्ट ६ मा तालिबानले पहिलोपटक निम्रुज प्रान्तको जारन्ज शहरलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसयता निरन्तर उसले एकपछि अर्को प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाएको छ । पछिल्लो १० दिनमा मात्र तालिबानले मुलुकको दुई तिहाइभन्दा धेरै प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा लियो । अमेरिकी सेनाले बग्राम एयसबेस छाडेको ४५ दिनमै अफगानिस्तानको अधिकांश भू-भागमा कब्जा जमाएको छ ।
जबकि एक महीनाअघिसम्म सबै प्रान्तीय राजधानी अफगानिस्तान सरकारको कब्जामा थियो ।
जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अफगानिस्तान युद्धको सुरुआत गरेका थिए । त्यो वर्षको डिसेम्बरमा आइपुग्दा तालिबानको सत्ता धरासायी भयो ।
सोमबार, ३२ साउन, २०७८, बिहानको ०७:४५ बजे